တရုတ် 5NM3/h ၉၉.၉၉၉ နိုက်ထရိုဂျင်ဂျင်နရေတာကိုစက်မှုသုံးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံထုတ် | Boxiang
u Nitrogen ထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည် 3Nm cubed /h nitrogen ကိုသန့်စင်ပြီး ၉၉.၉% ဤပရောဂျက်တွင်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အမှားရှာပြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
နိုက်ထရိုဂျင်တွင်ဖုန်မှုန့် contains ＜0.0001ppm ပါ ၀ င်သည်
လေထုနှင်းရည်အမှတ်： ≤-40 ℃
နိုက်ထရိုဂျင်ဖိအား ：0.1-0.65MPa (G) （ချိန်ညှိနိုင်သော
၁။ အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၏ Air Division Nitrogen System: JB6427/92 Standard
၂။ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုဝါယာကြိုးများတပ်ဆင်ခြင်း GB5226-96 အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသုတ်ဆေးကို JB2536-80 အရလုပ်ဆောင်သည်။
Pressure Swing Adsorption ဖြစ်သည်။ အတိုကောက်အားဖြင့် PSA သည်ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းပညာသစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်။ ⑴ထုတ်ကုန်သန့်ရှင်းမှုမြင့်မားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အခန်းအပူချိန်နှင့်ဖိအားနိမ့်ခြင်း၊ အပူမပါဘဲအိပ်ယာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ⑶စက်ပစ္စည်းများသည်ရိုးရှင်း။ လည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနည်းပညာအသစ်ထွက်လာသောအခါ၎င်းသည်နိုင်ငံအသီးသီး၏စက်မှုလုပ်ငန်းများကဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်သုတေသနလုပ်ရန်၊ လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပို၍ ရင့်ကျက်လာသည်။
၁၉၆၀ တွင် Skarstrom သည် PSA မူပိုင်ခွင့်ကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။ သူသည် 5A zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါကို adsorbent အဖြစ် သုံး၍ ခုတင်နှစ်လုံး PSA ကိရိယာကိုလေနှင့်အောက်ဆီဂျင်ကြွယ်ဝစွာခွဲထုတ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် psa နည်းပညာကိုစက်မှုအသုံးချမှုကအောင်မြင်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြားခြင်း၊ လေအခြောက်ခံခြင်းနှင့်သန့်စင်ခြင်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သန့်စင်ခြင်းစသည်ဖြင့်အသုံးချခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှအောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းပညာတိုးတက်မှုသည်လေထဲသို့ O2 နှင့် N2 ကိုခွဲထုတ်ရန် adsorbent ကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါနှင့်ဖိအားလွှဲစုပ်ယူခြင်းတို့ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Dalian ဓာတုသုတေသနအင်စတီကျုမှ PSA နည်းပညာကိုစတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက Hangzhou Boxiang ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီသည် PSA နည်းပညာ၏သုတေသန၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုကတိပြုခဲ့ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသောနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ Hangzhou Boxiang ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စက်ပစ္စည်းမျိုးစုံအစုံ ၁၀၀၀ ကျော်ကိုတရုတ်ပြည်အသီးသီးရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာမှနိုက်ထရိုဂျင်သည် cg-6 nitrogen buffer tank ထဲသို့ ၀ င်သွားပြီးသန့်စင်သောနိုက်ထရိုဂျင်ကို ၉၈% နှင့် ၉၀၀Nm3/h ဖြင့်ရရှိသည်။ အထွက်ဖိအား≥ 0.5mpa (ချိန်ညှိနိုင်သော)၊ လေထုနှင်းရည်အမှတ်သည် 40-40 ℃၊ ဆီပါဝင်မှု PP0.001 PPM ရှိပြီးဖုန်မှုန့်ပါဝင်မှုသည် ၀.၀၁μ၁ မီတာရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပြီးမြောက်သောနိုက်ထရိုဂျင်သည်သိုလှောင်ကန် (သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြင်ဆင်ထားသော) ထဲသို့ ၀ င်သွားပြီးသုံးစွဲသူ၏ဓာတ်ငွေ့အမှတ်သို့ပို့ဆောင်သည်။
A. နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်စက်သည် SIEMENS၊ ဂျာမနီမှ PLC S7-200 (programmable logic controller) ကိုလက်ခံသည်။ ယူနစ်သည်ကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်နိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးကိရိယာ၏အမျိုးမျိုးသောလည်ပတ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ၊ အခြေအနေနှင့်အမှားအချက်ပြချက်များကိုပြသနိုင်သည်။
B. နိုက်ထရိုဂျင်သန့်ရှင်းမှုကိုအွန်လိုင်းတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီတွေ့ရှိသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်မှထုတ်လုပ်သောနိုက်ထရိုဂျင်သန့်ရှင်းမှုသည်သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက် (၀ ယ်သူမှလိုအပ်သောနိုက်ထရိုဂျင်သန့်ရှင်းမှုအညွှန်းကိန်း) ထက်နိမ့်သောအခါ system သည်အလိုအလျောက်အချက်ပေးလိမ့်မည်။ စက်ပစ္စည်းများစတင်ပြီးပါက solenoid valve သည်နိုက်ထရိုဂျင်လေအဆို့ရှင်ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးပြီး nitrogen analyzer မှထိန်းချုပ်အချက်ပြကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်နိုက်ထရိုဂျင်ထွက်ပေါက်အပိတ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ အရည်အချင်းမရှိသောနိုက်ထရိုဂျင်သည်အလိုအလျောက်ထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သန့်စင်မှုပန်းတိုင်သို့ရောက်သောအခါအိတ်ဇောပိုက်သည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားပြီးနိုက်ထရိုဂျင်ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်သည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုထုတ်ပေးသည်။ အသုံးပြုမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးတွင် manual စစ်ဆင်ရေးမရှိပါ။
Type C, BXN နိုက်ထရိုဂျင်လုပ်စက်နှင့်သန့်စင်စက်ကိုအလိုအလျောက်စုပ်ထုတ်သည့်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်၊ နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်နိုက်ထရိုဂျင်သန့်ရှင်းမှုကောင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီးနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်နိုင်သည်၊ နိုက်ထရိုဂျင်သန့်စင်မှုသည်သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက်နိမ့်သောအခါကန့်သတ်ချက်စနစ်အသံနှင့်အလင်းအချက်ပေးမှုနိမ့်သည်၊ ပုံမှန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသို့ပြန်လာသောအခါအဆို့ရှင်ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပြီးနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုပုံမှန်ထွက်ပေါက်ပိုက်မှတဆင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးသည်။
D, အဆို့ရှင်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်လှံတံနှင့် pneumatic valve, ထိုးထွင်းသိမြင်မှု, နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအာမခံချက်ဖြစ်သည်။
E, အုန်းဖျာဆလင်ဒါအလိုအလျောက်ချုံ့နည်းပညာသည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ပစ္စည်းများ၏ရေရှည်နှင့်တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်မှုကိုအာမခံနိုင်ရန်၊ စနစ်၌ဆလင်ဒါဖိအားစက်ကိုတပ်ဆင်ပြီးချုံ့စနစ်၌တစ်ချိန်တည်းတွင်အချက်နှစ်ချက်ကိုသတ်မှတ်သည်။ နှိုးစက်ကိရိယာတွင်စောင့်ကြည့်ချိန်ညှိနိုင်သောဟိုက်ဒရောလစ်ခရီးတွင်ပထမအချက်၊ ဒုတိယဟိုက်ဒရောလစ်နှိုးဆော်သံသည်အသင့်အနေအထားကာဗွန်မော်လီကျူးဆန်ခါများစားသုံးမှုဖြစ်သည်။
F၊ နိုက်ထရိုဂျင်လုပ်သည့်ကိရိယာသည် Siemens PLC S7-200 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် touch screen ပေါင်းစည်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ကိရိယာအစုံအလင်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ အထွက်၊ အမှားအချက်ပေးခြင်း၊ အဝေးမှစတင်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ multi-screen display function ပါ ၀ င်သည်။